Wasirka xafiiska dooxooyinka & Waraabka oo booqdey degmada Erer. - Hargeele - Wararka Somali State
March 23, 2020 753
wasiirka xafiiska horumarinta waraabka iyo dooxooyinka DDS mudane C/raxmaan Ciid Daahir oo ay la socdaan ku xigeenkiisa iyo sidoo kale madaxa xarunta xisbiga Barwaaqo ee gobolka Siti mudane Maxamed Maxamuud, ayaa kormeer shaqo ku tagey qaybo ka mid ah qabaleeyada degmada Erer oo qani ku ah wax soosaarka beeraha gaar ahaan khudaarta iyo noocyada kala duwan ee geed miiroodka. Wasiirka ayaa aad ugu hamabalyeeyey bulshada ku dhaqan degmada Erer isaga oo ku bogaadiyey sida ay wax soo saarka beeraha uga midho dhaliyeen. Bulshada degan degmadaas waxa ay wasiirka ka codsateen in wixii tamartooda ka awood badan dawladu ka caawiso si ay dhiiri galin ugu noqoto isla markaana waxs oosaarkooda u sii kordhiyaan. Mudane Cabdiraxmaan wasiirka xafiiska horumarinta waraabka dooxooyinka DDS ayaa geestiisa sheegay in ka xukumad ahaan iyo xafiis ahaanba ay bulshada Erer waxa la qaban doonaan isla markaan kaalmo kala duwan siin doonaan.
Kooxda Liverpool oo horraantii Isbuucaan u dabaal-degi lahayd hanashada Premier League, balse Anfield waa mid cidlo ah… + SAWIRRO
Wadooyin laami ah oo laga hirgalinayo magaalada Godey.